DAAWO-Tukaraq oo ay Durba Ka Curatay iyo Muuse Biixi oo u Soo Hanjabay Madaxweyne Siciid Denni “Ilaa Yoocada ayaan..
January 10, 2019 puntlandnews Somaliland, Wararka Maanta 1
Puntlandnews.net (Hargaysa)-Xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa hanjabaad culus u soo dirtay madaxweynaha dowladda Puntland Dr Siciid Cabdullaahi Denni.
Wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Saleebaan Cali Koore oo ka soo jeeda gobolka Sool ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay hadalkii madaxweynaha cusub ee Puntlandd ku sheegay inay ka go’antahay xoraynta gobolka Sool.
Saleebaan Cali Koore oo ilaashanaya kursigii xukuumadda Muuse Biixi ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Puntland hadalkiisu uusan jirin isla markaana magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool uu yahay dhul ay leedahay Somaliland.
Madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa durba ku dhawaaqay war uusan ku farxin maamulka Somaliland iyo dagaal lagu xoraynayo deegaamada maqan ee gobolka Sool.
Denni ayaa sheegay in maamulka Somaliland uu ku soo xad gudbey xuduudaha dastuuriga ah ee Puntland isla amrkaana xukuumadda cusub ee uu dhisayo aysan marnaba u sii fiirsan doonin dhibaatada ciidanka Somaliand kawadaan gobolka Sool.
Dhinaca kalena, Denni wuxuu sheegay war aysan ku farxin dowladda Soomaaliya isagoona xusay in golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu uu yahay mid dastuuri ah ayna xaq u leeyihiin samaysiga gole u adeega danohooda gaar ka ah.
USTAAD KHALIIF says:
MA FAHMIN MGDAXWEYNE DENIYE WAA KUMA MUCAARAD IYO MUXAAFID MAXAA TUURTA U SAARAY GOLAHA MG YADA EE KHILAAFKA KU SALAYSAN